बाथ रोग जुनकुनै उमेरका लागि लाग्न सक्छ : डा. अभिलाषा शाह – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
बाथ रोग जुनकुनै उमेरका लागि लाग्न सक्छ : डा. अभिलाषा शाह
११ माघ २०७८, मंगलवार ०३:४२
अहिले देशैभरि चीसो बढिरहेको छ । बढ्दो चीसोसँगै बिरामीहरू पनि बढेका छन् । पुराना दीर्घ रोग भएकादेखि चीसोबाट हुने पखाला देखि रुघाखोकी, निमोनियाको बिरामी बढेका छन् । यो चिसोमा दम र बाथका रोगीहरुलाई बढी च्याप्ने गरेको देखिन्छ । आज हामीले बाथ रोगका बिरामीको कसरी हेरचाह गर्ने, औषधि उपचार कसरी गर्ने, अन्य रोग र बाथरोगको लक्षण कसरी छुट्याउने भन्ने बारे चिकित्सक डा. अभिलाषा शाहसँग संवाद गरेका छौँ । संवादको क्रममा डा. शाहले मानिसहरूमा देखिएका अन्य रोगहरूको र बाथ रोगको लक्षण उस्तै लाग्ने भएकोले बाथ रोगको लक्षणमा पनि मानिसहरू गलत धारणा र अनुमानले उपचार गरिरहेको बताउनुभयो । डा शाहले बाथ रोग सम्बन्धि समाजमा केही गलत धारणा रहेको बताउनुभयो । यस्तो अवस्थामा बाथ रोगको उपचार गर्नुपर्नेमा अन्य रोगको उपचार गर्न खोज्ने अन्य रोगको उपचार गर्नुपर्नेमा बाथ रोगको उपचार धेरै हुने पाइएको छ । डा. शाहले बाथ रोगको पहिचान परिक्षण गरेरमात्र स्पष्ट हुने बताउनुभयो । प्रस्तुत छ डा. अभिलाषा शाहसँग बाथ रोग सम्बन्धि न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी ।
तपाईले दिनहुँ बाथरोगका बिरामी चेकजाँच गर्नुहुन्छ, हामो समाजमा कस्तो रुपमा पाउनुहुन्छ, बाथरोगको अवस्था ?
बाथरोग भन्ने हो भने नेपालमा खास बाथरोग धेरै नै देखिएको छ । धेरै मात्रामा छ तर त्यसको डाइगोनोसिस मात्रै नभएको हो । पहिला त बाथरोग भनेको के हो नै धेरैले बुझेको छैन । सचेतना जानकारी नभएर पनि होला । बाथरोगको लक्षणहरु देखेपछि विशेषज्ञकोमा नगइकन यो डाइगोनोसिस नभएको हुनाले मात्र बाथरोग भन्ने, खालि बुढाबुढीलाई मात्र हुन्छ भन्ने एउटा गलत बुझाइ धारणा छ । बाथरोग भनेको दिनदिनै डब्ल्यूएचओको तथ्यांकअनुसार भनिन्छ कि विश्वमा मोर देन १० प्रतिशतलाई बाथरोग छ । नेपालमा त्यस्तो कुनै अध्ययन त भएको छैन । कति जनालाई बाथ छ, के छ ? तर अहिले बिस्तारै बिस्तारै सचेतना बढ्न थाल्यो, डाइनोसिस हुन थाल्यो । त्यसपछि बाथको बिरामीहरु दिनदिनै बढेको देखिन्छ ।
कसैलाई बाथरोग छ भनेर कसरी थाहा पाउने, प्रारम्भिक रुपमा कसरी अनुमान गर्न सकिन्छ ?
यौन सुख र भय
इसेवाको क्यासब्याक अफर
मिस ग्राण्ड नेपालको पाचौं